May 2022 – Page2– SainPwar
အင်းဝပျက်ကိန်းနဲ့တထပ်တည်းပါလား.💥❓ အင်းဝပြည်ကြီး အလုံးစုံ ပျက်စီးစေတဲ့၊ ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့မင်းဟာ,ကြာသပတေးမင်းခေါ် ဟံသာဝတီမင်းပါတဲ့၊ ၁၆နှစ်နဲ့ ဘုရင်ဖြစ်ခဲ့၊ ဗေဒင်၊ယတြာ၊အလွန်ယုံတယ်၊ အဆောင်,လက်ဖွဲ့ ၊ အထက်လမ်း၊အောက်လမ်း၊ အစီအရင်,ဂါထာ,မန္တရား တွေကို၊ပြုလုပ်စေတယ်၊ဆောင်ထားတယ်၊ အသိပညာညဏ်၊ အလွန်အမင်း၊အားနည်းတယ်။ ပညာရှိ မှူးမတ်တွေကို၊သတ်တယ်၊ဖမ်းတယ်၊ဖယ်ရှားတယ်၊ လူမိုက်တွေကို မြှောက်စားတယ်၊ ဘွဲ့ထူး,ဂုဏ်ထူးတွေကို ပေးတယ်၊မိမိကိုယ်ကိုလဲ? မတန်မရာဘွဲ့ထူး,ဂုဏ်ထူးတွေကို၊သတ်မှတ်အမည်တပ်တယ်၊ သူ့ခေတ်မှာ၊ဆင်းစီး၊ ရွှေထီးဆောင်းပြီးလူဆိုးက၊ ဓါးပြတိုက်တယ်၊ သာသနာမှာလဲ ဖျက်တယ်၊ရဟန်းကြီးကြိုက်ဆိုတဲ့ သေရည်အရက်ကိုတောင် ဖန်တီးခဲ့တယ်၊ ဂုံးချော,ဂုံးတိုက်စကားတွေကို၊ အလွန်ယုံကြည်တယ်၊ အရပ် လေးမျက်နှာမှာ၊ စစ်ဖြစ်တယ်၊ စစ်မျက်နှာပွင့်တယ်၊ စစ်ဗိုလ်,စစ်သားတို့ လွန်စွာဖေါက်ပြန်, ဆင်းရဲခြင်းဖြစ်တယ်။ သူ့ရဲ့အဆိုအမိန့်တခုက၊ ...
“တစ်ဧက စိုက်ထားရင် တစ်နှစ် ဝင်ငွေ သိန်း(၆၀) ရနိုင်တဲ့ လေချူသီးပင် စိုက်ပျိုးနည်း”
လေချူသီးပင် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ် အပူပိုင်း အအေးပိုင်း၂မျိုးလုံး စိုက်ပျိုးနိုင်ပါတယ်။ အပင်စိုက်ရန် အကွာအဝေးမှာ ၁၃ ပေ × ၁၅ ပေ = ၂၀၀ ပင်/ဧက ၁၅ ပေ × ၁၅ ပေ = ၁၇၀ ပင်/ဧက ၂ ပေ ပတ်လည် ကျင်းတူးပြီး နွားချေး ၁ အိတ်မြေခံထည့် နှပ်ပေးရမည်။ ၃ နှစ်သားတွင် အသီးစသီးမည်။ ၃-၅ ပိသာ/တစ်ပင်အပင်ပြုစုပုံ ရေလောင်း ပေါင်းရှင်း မြေဩဇာကျွေးချင်း သဘာဝမြေဩဇာ ...
သီလရှင် ၂၁ရက်ကြာဝတ်ပြီးနောက် ဂေါတမီရတနာ လူဝတ်ပြန်လဲခဲ့ အီတလီနိုင်ငံသူ ဂေါတမီရတနာသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ လှည်းကူး-ဖောင်ကြီးလမ်း၊ စာဘူးတောင်းကျေးရွာနယ်မြေရှိ မဂ္ဂဖလဝိဟာရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဝိပဿနာတောရတွင် ၂၁ရက်ကြာ သီလရှင်ဝတ်ပြီးနောက် မနေ့က လူဝတ်သို့ပြန်လဲသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ သူမအနေဖြင့် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏သမီးတော် သီလရှင်တပါးအဖြစ် ရာသက်ပန်နေထိုင်သွားလိုသော်လည်း မိခင်ဖြစ်သူအား ပြုစုလုပ်ကျွေးရမည့်တာဝန်ဝတ္တရားများရှိနေသော‌ကြောင့် အီတလီနိုင်ငံသို့ မကြာမီ ပြန်ရဦးမည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၌ သီလရှင်ဆရာလေးအဖြစ် သာသနာ့ဘောင်သို့ ခေတ္တဝင်ရောက်ခဲ့စဉ် အတွေ့အကြုံခံစားချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဂေါတမီရတနာက လူမှုကွန်ရက်မှတဆင့် ရေးသားထားသည်မှာ “ကျမဘဝမှာ ယခင်က နေထိုင်ရှင်သန်ခဲ့ဖူးသမျှတွေထဲမှာ သီလရှင်ဝတ်ခွင့်ရတာဟာ အလေးနက်ဆုံး အတွေ့အကြုံပါ။ ...
ခွေးချစ်တဲ့သူတိုင်းဒီခံချက်ကိုကောင်းကောင်းနားလည်မှာပါ လုပ်ရက်လိုက်ကြတာ ကျနော်ခွေးက ရပ်ကွက်ထဲလျှောက်သွားနေတဲ့ခွေးမဟုတ်သလို အိမ်ထဲကနေအိမ်ပြင်တောင်မထွက်ဘူး ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း မကိုက်ဖူးဘူး ကျနော်တို့အပြင်ကပြန်လာလို့ကားသံ ဆိုင်ကယ်သံကြားရင်သူထွက်ကြိုတတ်တယ် မနေ့က ကျနော် အပြင်ကပြန်လာတော့သူကျနော် ကားသံကြားလို့ ထွက်လာတာအိမ်ရှေ့လေးမှာပဲ .. အဆိပ်က အိမ်ရှေ့တံခါးဝတည့်တည့်လာချသွားတာ(လူစိတ်မရှိတဲ့ အောက်တန်စားတွေ)က သူကောက်စားလိုက်တာတော့တွေ့တယ် ဘာမှန်းမသိလိုက်ဘူး အဆိပ်ခပ်ထားမှန်းလည်းမထင်ဘူး သူ့ကို ပွေ့ချီလိုက်သေးတယ်ခနနေ သုံးမိနစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ် သူက ပုံစံမမှန်တော့ဘူး အော်ပြီးတစ်အိမ်လုံးပတ်ပြေးတာ(ဘယ်လောက်တောင်နာကျင်နေမလဲ) ခနနေတော့ ကျနော်အဖေက ခွေးကအဆိပ်မိနေတာတဲ့ ကြားကြားချင်း ရင်ဝကို ဓားစိုက်ဝင်သွားသလိုပဲ ကျနော် ချက်ချင်းအသက်ကယ်ဆေးတစ်လုံးထိုးပေးလိုက်သေးတယ် ပြီးတော့ အဖေတို့က ငါးပိရည်ရောကြက်ဥတွေရော အကုန်တိုက်တယ်( လုပ်တတ်သလောက်) ...
ဒူးရင်း (၁၀).ပင် ဆယ်နှစ်နေလို့မှ မသေရင် အိုဇာတာ ကောင်းပြီးလို့သာမှက်ပါ
ကမ္ဘာမှာ အနံအရသာနဲ့ပြည်စုံးသောအသီးလို့ ပြေားရင် ဒူးရင်သီးကိုပဲ ပြရမှာဖြစ်တယ် စျေးအကောင်ဆုံး အသီးကိုပြောပါဆိုရင်လည်းဒူးရင်သီးကိုပဲ ပြရမှာဖြစ်တယ် ဒူးရင် ၁၀.ပင် ဆယ်နှစ်နေလို့မှ မသေရင် အိုဇာတာ ကောင်းပြီးလို့သာမှက်ပါ.. 😀😀 အာဟာရဓာတ်ပါဝင်မှုမြင့်မားတဲ့ ဒူးရင်းသီး စိုက်ပျိုးနည်း ၁။ မူရင်းဒေသ – အရှေ့တောင်အာရှ၊ အီကွေတာမိုးသစ်တော။ အင်္ဂလိပ်အမည် – DURAIN၊ ရုက္ခဗေဒအမည် – Durio Zibethenus၊ မျိုးရင်းအမည် – BOMBACEAE ဖြစ်ပါသည်။ ၂။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စိုက်ပျိုးနိုင်သောဒေသများ မွန်ပြည်နယ်၊ တနသာင်္ရီတိုင်း၊ ကရင်ပြည်နယ် ...
ပြည်သူလက်မခံတဲ့ စစ်ကျွန်ပညာရေးမှာ ကျော့ကျော့မော့မော့ နေကြတဲ့ ဆရာ ဆရာမတွေထက် ဒီCDMကျောင်းဆရာကိုပိုလေးစားတယ်
ပညာရေးမှာ ကျော့ကျော့မော့မော့ နေကြတဲ့ ဆရာ ဆရာမတွေထက် ဒီCDMကျောင်းဆရာကိုပိုလေးစားတယ် ဒီပုံကိုတင်ဖို့အထပ်ထပ်စဉ်းစားတယ် ကာယကံရှင်ကိုခွင့်တောင်းမယ်ကြံလိုက် အလုပ်မအားလိုက် မေ့လိုက်နဲ့ ခုတော့တင်လိုက်ပြီ သူလာကန့်ကွက်ရင်တော့ပြန်ဖျက်ပါ့မယ် CDM ကျောင်းဆရာပါ နေ့စားနဲ့ဆေးသုတ်လိုက်နေတာ ပင်ပန်းလွန်းလို့နားနေတဲ့ပုံကလေးပါ CDM စဝင်ကတည်းက ဖုန်းဘေတထောင်တောင်မတောင်းခဲ့ဖူးပါဘူး ခုထိဆိုပါတော့ ကိုယ်ကလည်းသောက်လိုက်ကမ်းဆိုးမသိ တခါမှမကူညီဖူးပါဘူး သည့်ထက်လည်းမပြောတတ်တော့ပါဘူးဆရာ တော်လှန်ရေးအောင်မြင်စေချင်တာ သူတို့အတွက်ပါ၊ကလေးတွေအတွက်ပါ၊ နစ်နာသူတွေ၊အနစ်နာခံသူတွေအတွက်ပါ။ via-ကျော် သီ ဟ unicode ဒီပုံကိုတငျဖို့အထပျထပျစဉျးစားတယျ ကာယကံရှငျကိုခှငျ့တောငျးမယျကွံလိုကျ အလုပျမအားလိုကျ မေ့လိုကျနဲ့ ခုတော့တငျလိုကျပွီ သူလာကနျ့ကှကျရငျတော့ပွနျဖကြျပါ့မယျ CDM ကြောငျးဆရာပါ နေ့စားနဲ့ဆေးသုတျလိုကျနတော ပငျပနျးလှနျးလို့နားနတေဲ့ပုံကလေးပါ ...
လုပ်ချင်ရာလုပ်ပြီး အလှဆုံးပြုံးနေတတ်သော စိတ်မမှန်သောရာသီခွင်များ…..
လုပ်ချင်ရာလုပ်ပြီး အလှဆုံးပြုံးနေတတ်သော စိတ်မမှန်သောရာသီခွင်များ❗❗❗ 1.Gemini ကစိတ်ရှုပ်တတ်ကြပါတယ်နော် ပြောရရင်စိတ်မကြည်တဲ့အချိန်ကများတယ် စိတ်ကဒေါသထွက်တာတို့ စိတ်မကြည်တဲ့ အချိန်တွေကများတယ်…ပြီးရင်စိတ်လည်းမမှန်ကြဘူး… စိတ်ကလေကောင်းခြင်းကောင်းနေပြန်ရောဆိုးရင်လည်းသူတို့ပဲ ပြောရရင် သူတို့စိတ်ကခန့်မှန်းရအရမ်းခက်တယ်..အများအားဖြင့်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကိုစိတ်ကောက်လိုက်ရမှကျေနပ်ကြတာ ချစ်သူဆိုရင်လည်း စိတ်ဆိုးတာခဏခဏဖြစ်တတ်တယ်… ဒါပေမယ့်နော်ချစ်သူကိုဆိုရင်စိတ်ဆိုးရင်တောင်စိတ်မဆိုးဘူးဆိုပြီးပြောတတ်ကြပါတယ်နော်……နဲနဲလေး စိတ်ကြီးတယ်…သူတိူ့ကိုအလိုလိုက်မှကြိုက်ကြတာ 2.Virgo Virgoအတော်များများက လူကြီးဆန်မလိုလိုနဲ့တကယ်တမ်းကလေးဆန်ကြတယ်…အထူးသဖြင့် ကိုယ့်ကို ကိုယ်သဘောကျတဲ့သူက ကလေးလိုသဘောထားပြီးဂရုတ်တစ်စိုက်ချစ်တာမျိုးကိုကြိုက်ကြပါတယ် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိကြတယ်နောက်ပြီးသူတို့ကစိတ်မမှန်ဘူးသူငယ်ချင်းတွေတိုလည်းသူ့ကိုအလိုလိုက်ရတာများတယ် ပြီးရင် သူက တစ်ခါတစ်လေ ဆိုတစ်ယောက်တည်းနေတတ်တယ်… အေးတိအေးစက် အမှန်က အကြောင်းတစ်ခုစိတ်ညစ်စရာရှိရင်အဲ့ကိစ္စကိုပဲ စိတ်ထဲမှာစွဲ ပြီး မှတ်ထားတတ်တယ် ကိုယ့်အပေါ်မကောင်းဘူးထင်ရင် သူငယ်ချင်းတွေကိုစွန့်လွှတ်တတ်ကြတယ်..ချစ်တဲ့သူကိုတော့အလွယ်တကူမစွန့်လွှတ်တတ်ကြဘူးနော် 3.Pisces Piscesတွေကတော့သဘောထားကြီးကြတယ်ပျော်တတ်ကြတယ် စိတ်ညစ်နေရင်တောင်စိတ်ညစ်တဲ့ပုံမဟုတ်ဘူး…ပြောရရင် FeelingတွေကိုHideလုပ်ထားတယ် သူများမသိစေချင်ဘူး ...
တန်ရာတန်ရာပေါ့ဗျာ….ရန်ကုန်မှ မန္တလေးသို့ သွားသော ရထားပေါ်တွင် ဖြစ်သည်။ ရထားပေါ်မှာပါလာတဲ့ ခရီးသည်တစ်ဦးရဲ့ လက်ထဲမှာ ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ ၂၀၀ တန်အစုတ်လေး တစ်ရွက်။ သူက လာသမျှ ဈေးသည်တွေကို အဲဒီပိုက်ဆံလေးနဲ့ လိုက် ဝယ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့်…ဈေးသည် တော်တော်များများက “ဒီပိုက်ဆံလေး ပြန်လဲပေး ပါဦး” ဆိုပြီး လဲခိုင်း တယ်။ ဒီတော့ သူစဉ်းစားနေတယ်..”အင်း” ဒီအတိုင်းဝယ်နေလို့ကတော့ အဆင်ပြေမှာမဟုတ် ဘူး။ ငါ နောက်ဘူတာကို ရောက်ရင် ရထားထွက်ခါနီးမှပဲ ဝယ်မယ်။ ဒီလိုဆိုရင်သူတို့ ပြန်လဲခိုင်းလို့ရမှာမဟုတ်တော့ ဘူး” သူ့အကြံနဲ့သူကတော့ ...
ထူးထူးဆန်းဆန်းတိုက်ဆိုင်မှုပဲလား အမွှာညီအစ်ကိုရှိတဲ့အိမ်မှာ နွားအမွှာညီအစ်ကိုထပ်မွေးတာက….
ကံပဲ ကောငျးလှနျးတာလား ထူးဆနျးတဲ့ တိုကျဆိုငျမှုပဲလား ဝမျးတှငျးမွို့နယျ၊ ပငျးတလဲရှာမှာ နှားပိုငျရှငျကယောကျြားလေး အမှှာမှေးထားပါတယျ နှားပိုငျရှငျရဲ့ နှားမကွီးကလညျး နှားထီးလေး၂ကောငျ အမှှာမှေးပွနျပါတယျ ခစြျစရာလေးတှပေါ၊ သားယောကျကြားလေးဆိုတာ မိဘတိုငျးလိုခငြျကွတာဖွစျပွီး ခုလို အမှှာလေးရထားတယျဆိုတော့ ကံကောငျးတယျလို့ပွောရမှာဖွစျပါတယျ ဒီလိုပဲ နှားပိုငျရှငျတိုငျးကလညျး နှားထီးကိုပဲ မှေးစခေငြျကွတာပါပဲ ခုတော့ ရှားရှားပါးပါး ထူးထူးခှားခှား နှားထီးအမှှာလေး ရထားတယဆြိုတော့ ကံကောငျးလှနျးမက ကောငျးတယျလို့ ပွောရမှာ ဖွစျပါတယျ Credit ကံပဲ ကောင်းလွန်းတာလား ထူးဆန်းတဲ့ တိုက်ဆိုင်မှုပဲလား ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်၊ ပင်းတလဲရွာမှာ နွားပိုင်ရှင်ကယောက်ျားလေး အမွှာမွေးထားပါတယ် ...
ဒီ အ​မေ ဒီ သား သမီး ​တွေကိုဘယ်လိုစိတ်နဲ့ စိတ်ချပါ့မလဲကွယ်
ဒီ အ​မေ ဒီ သား သမီး ​တွေကိုဘယ်လိုစိတ်နဲ့ စိတ်ချပါ့မလဲကွယ် အိမ်လေးတစ်လုံးလိုချင်တယ် သီချင်းနဲ့ လူအများသိလာတဲ့ အဆိုတော် မာသထူးဝါး(ဖိုးမူကြီး)ရဲ့ မိခင်မမိုင် ၄၁ နှစ်ဟာ အသည်းကင်ဆာရောဂါနဲ့ ဒီနေ့မှာဘဲ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ ကိုးရီးယားနိုင်ငံ Catholic University S.Mary Hospital (Bucheon)မှာ အသည်းကင်ဆာရောဂါကုသမှုခံယူရင်း မေလ ၂၉ရက်နေ့ ကိုရီး ယားစံတော်ချိန် ၆း၄၉နာရီအချိန်မှာ ခရစ်တော်၌အိပ်ပျော်သွားခဲ့တာပါ။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကတော့ ကရင်လူမျိုးရဲ့အဆိုတော် စောထူးဝါးဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်က ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်တစ်နေရာမှာ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်းခံရလို့ လူမမယ်ကလေး ...